Chief Ndiweni Votosvorana neVanhu veZanu PF
Chivabvu 16, 2019
Nyaya yaChief Nhlanhlayamangwe Ndiweni yekushora hurumende pamusoro pemabatirwo enzvimbo yeNtabazinduna kuMatabeleland North iri kutsviriridza munyika vamwe vachitsigira Ishe Ndiweni, vamwe vachivashora.
Chief Ndiweni vanoti gomo reNtabazinduna, iro riri zvinhanho zvinosvika makumi mana kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweguta reBulawayo, riri mukati merimwe purazi rakapiwa VaFloyd Ambrose, danho ravanoti harisi pamutemo.
Chief Ndiweni vanoti gomo reNtabazinduna rakakosha zvikuru kuvanhu verudzi rwechiNdebele vachiti ndipo pakasvikira Mzilikazi kaMashobane uyo akave Mambo wekutanga werudzi urwu.
Mumashoko avakabudisa paTwitter Chief Ndiweni vakatenda rutsigiro rwavari kuwana vachiti havazi kuzodzora tsvimbo pakurwira kuti gomo reNtabazinduna, iro riri pasi penzvimbo yavo, ritorwe nenzira yavanoti isisri pamutemo zvisinei nekushorwa kwavo nevamwe vakuru vakuru vehurumende, veZanu PF nevamwe vanhuwo zvavo.
Zvichitevera kupihwa kwakaitwa VaAmbrose purazi munzvimbo yavo, Ishe Ndiweni vakati hurumende, iyo vakati haisi kuchengetedza mitemo, inofanirwa kuwedzerwa zvirango zvayakatemerwa.
Mutevedzeri wegurukota rezvekudzivirirwa kwenyika, VaVictor Matemadanda, pamwe nemunyori webazi rezvekufambiswa kwemashoko, VaNick Mangwana, vakashora Chief Ndiweni pamusoro pemashoko avo ekukurudzira zvirango.
Asi mutauriri webato reZAPU, VaIphithule Maphosa, vanoti kunyombwa kuri kuitwa Chief Ndiweni uku kunoratidza kuti hurumende yebato reZanu PF inobata madzishe ichitarisa kuti vabuda mumba maani izvo vati hazvifanirwi kudaro.
Nezuro vamwe vechidiki vanofungidzirwa kuti vatsigiri veZanu PF vanonzi vakada kutora nechisimba motokari yaChief Ndiweni, asi vakazokundikana.
Bato reMDC inotungamirwa naVaNelson Chamisa rabudisawo gwaro rekushora kunyombwa nekushungurudzwa kwaChief Ndiweni richiti panofanirwa kuve nematanho anotorwa kune vakuru vakuru vehurumende vakanyomba Chief Ndiweni pamwe neavo vaida kuvatorera motokari yavo.
Boka revechidiki reMDC muBulawayo ratsigirawo mashoko aya.
Imwe nhengo yeboka iri, VaTakunda Madzana, vati Chief Ndiweni vanofanirwa kurumbidzwa nenyaya yavo yekurwira kodzero dzevanhu vavo.
Asi imwe nhengo yeCentral Comittee yebato reZanu PF, VaJoseph Tshuma, vaudza Studio7 kuti kukurudzira kwaChief Ndiweni kuti nyika itemerwe zvimwe zvirango kunoratidza kuti vave kupindira mune zvematongerwo enyika izvo vati hazvikodzeri kuitwa nemadzishe.
Pane kuratidzira kwakarongwa kuitwa mangwana nevanhu vari kutsigira Ishe Ndiweni vachiti Ishe Ndiweni vanofanirwa kuremekedzwa sezvinodiwa nebumbiro remitemo yenyika.
Hurumende Yoshorwa neKutyora Kodzero DzeVatori veNhau
VaMohadi Vokuridziva Vanhu Kuti Vasimbaradze Kuzvidzivirire Kubva kuCoronavirus
MISA-Zimbabwe Inoti Mutemo Mutsva weFreedom of Information Act Wakanaka Asi Wakasara neZvimwe Zvaive muAIPPA